Umlando WeHentai, Nokuthi Kwenzeka Kanjani Konke EJapan - Okunye
Umlando WeHentai, Nokuthi Kwenzeka Kanjani Konke EJapan
Kuwo wonke umlando, i-hentai ibe ngenye yezinhlobo ezinkulu kakhulu eyake yaba khona ngokuthandwa kwayo okukhula njalo.
akumangazi ukuthi kungani lolu hlobo lokuphikisana lungenye yezinhlobo ezibaluleke kakhulu ezake zaba khona emlandweni we-anime, ngoba luxhuma abantu hhayi eJapan kuphela, kodwa nasemhlabeni wonke.
Iningi labantu libheka i-hentai njengenye yalezo izinto eziyinqaba ezenziwa yiJapan, futhi angikwazi ukubasola ngalokho ngoba I-WEIRD AS HELL!
Kepha ngemuva kwayo yonke into eyodwa esiyibonayo ezimpilweni zethu zansuku zonke kukhona umlando wokuthi uyathakazelisa noma cha.
Futhi ngilapha ukukutshela ngomlando wesinye sezimbangela ezidume kakhulu embonini yezokungcebeleka yaseJapan.
Umlando omfishane weHentai - Isiqalo
Noma kungekho bufakazi obenele bokuthola ukuqala ngqo kwe-hentai, imikhondo yayo emidala kunayo yonke ingabhalwa emuva ngekhulu le-16 lapho yathatha khona isimo sikaShunga.
Shunga, ifomu laseJapan le- ubuciko bezocansi, kucatshangwa ukuthi kwaba khona kusukela esikhathini sikaHeian (704 AD-1185 AD) ngandlela thile.
Kusukela ngekhulu le-16 kuya kwele-19 leminyaka, imisebenzi ye-shunga yayicindezelwa yi-shogun ikakhulukazi njengoba ukushicilela kwaduma kakhulu esikhathini se-Edo (1603-1868).
I-shogunate yaseTokugawa ibhekise imisebenzi ethile ukucwaninga njengobuKrestu, ukugxekwa kwe-shogunate nolwazi ngemisebenzi yomndeni wakwaTokugawa.
Kodwa-ke, ukushicilela kwaba nzima kakhulu ngenxa yezinguquko zaseKyoho. Izinguquko kyoho zaziyinqwaba yezinqubomgomo zezomnotho nezamasiko ezethulwa yiTokugawa Shogunate ngo-1736.
Lolu shintsho luqinile impela, luvimbela ukwenziwa kwazo zonke izincwadi ezintsha ngaphandle kokuthi ukhomishani wedolobha anikeze imvume.
Ngemuva kwalokhu ku-oda, yilokho kuphela yahamba ngomshoshaphansi kodwa konke kwaba kubi kakhulu ngenkathi kuguqulwa uKansei (1798-1801).
Ithi noma yikuphi okubonakalayo njengokuphazamisa indlela yokuphila, kanye nezincwadi zikanokusho, kwabhekwa.
Futhi ngaphansi kwezinguquko ze-Tenpō (ezethulwa ngo-1842) zonke izingxenye zokunyathelisa izincwadi ezivusa inkanuko, kanye no-shunga, zaziphakathi kwalabo ababanjiwe.
Ukuya ngekhulu le-19 ngemuva kokubuyiselwa kweMeiji
Lokhu kumakiwe ushintsho olukhulu kwezepolitiki eJapan.
Uhulumeni waqala ukucindezela okunzima emibonweni yasentshonalanga, izithombe zobulili ezingcolile nemibhalo yezepolitiki ebucayi kumbusi waseJapan nakuhulumeni.
Ukuvinjelwa kwanda ngokungeziwe kusuka kuleli phuzu kuqhubeke, ikakhulukazi lapho ikhodi ye-Criminal yaseJapan iphasiswa njengomthetho no. 45.
Esahlukweni XXII ubugebengu bokuhlambalaza, ukudlwengula kanye ne-bigamy, i-athikili 175 ithi:
“Umuntu osabalalisa uthengisa noma abonise emphakathini incwadi engamanyala, ukudweba noma ezinye izinto uzojeziswa ngokuboshwa nomsebenzi isikhathi esingeqile eminyakeni emibili. Inhlawulo engekho ngaphezu kwama-yen 2,500,000 yen noma inhlawulo encane.
Kuzosebenza okufanayo nakumuntu onempahla efanayo ngenhloso yokuthengisa. ”
Manje, lo mthetho uqinise ukwenqatshelwa kokuphatha nokusabalalisa imibhalo yezocansi, kufaka phakathi i-hentai ikakhulukazi futhi kuba kubi nakakhulu NGOKWENZA lapha.
Ama-Bygones empi yasePacific
Emuva ngo-1928 isijeziso sokufa sanezelwa ekuphuleni okuthile kwemithetho ethile.
Ekugcineni, lokhu kwaqhubekela phambili emnyangweni wolwazi nenkulumo-ze waphakanyiselwa ehhovisi lezokwaziswa ngo-1940.
Ngonyaka olandelayo ngenxa yokwethuka okwabangelwa yimpi, ukubukezwa kabusha komthetho omusha wokugqugquzela kwaqeda ngokuphelele inkululeko yabezindaba.
Lokhu kusho ukuthi akekho ongasabalalisa noma athengise noma yini ngaphandle kwemvume noma kwemvume evela kuhulumeni noma kumbusi.
Iphepha ngalinye kufanele lihlolwe nguhulumeni ngaphambi kokukhishwa. Konke lokhu kwenzeke ngenxa yengcindezi eyalethwa yimpi yasePacific kanye nakho konke ukungezwani okwenzeka eYurophu nasemhlabeni wonke.
Ukudlulela ekuzinikeleni eJapan okwamenyezelwa ngu-Emperor Hirohito Ngo-Agasti 15, 1945 futhi kwasayinwa ngokusemthethweni ngoSepthemba 2, 1945.
Ngemuva kokuzinikela kweJapan, umphathi omkhulu wezizwe ezihlangene, Jikelele uDouglas MacArthur uqede zonke izinhlobo zokucwaningwa nenkululeko yokukhuluma.
Lokhu kuphinde kwasetshenziswa ngokuzikhandla kumthethosisekelo waseJapan eSahlukweni III.
Amalungelo nemisebenzi yabantu, indatshana 21 imi kanje
“Inkululeko yokuhlangana nokuhlangana, kanye nenkulumo, abezindaba nazo zonke ezinye izindlela zokukhuluma, kuqinisekisiwe. Akukho ukuvinjelwa okufanele kugcinwe, futhi nokufihlwa kwanoma iyiphi indlela yokuxhumana ngeke kwephulwe ”.
Kodwa-ke, ukuvinjelwa kwabezindaba kwahlala kuyinto yangempela ngenkathi yangemva kwempi, ikakhulukazi ezindabeni zepolitiki.
Kepha ngenxa yomthethosisekelo waseJapan, yonke imboni yezocansi, kanye nayo yonke imboni yezikaqedisizungu yathatha ushintsho olukhulu ngenxa yezindaba zokucwaninga.
Kepha lokho kuzoba yisihloko sakamuva.
Ukuqala phansi futhi
Ngemuva kokushicilelwa kwezithombe zocansi zempi yasePacific kanye nokushicilelwa kwabezindaba ekugcineni bekhululekile ukwenza noma yini abayifunayo.
Noma kusenemikhawulo okuhle kwayo ukuthi ayisiqinile njengakuqala.
Manje njengoba umthethosisekelo usemuva kwabo, abezindaba baseJapan nomkhakha wezokuzijabulisa wonkana sebekulungele ukuqala phansi futhi.
Kukhulu, Kungcono futhi kunqunywe kakhulu kunanini ngaphambili.
Ngenxa yethonya lezithombe zocansi ngekhulu le-19 nele-20, imidwebo ejwayelekile yama-manga emuva lapho kuboniswa ngabalingiswa ababonakala bengokoqobo.
Kepha u-Osamu Tezuka uchaze ukubukeka kwesimanje kwama-manga no-Astroboy wakhe, neminye imisebenzi futhi kamuva wabizwa ngokuthi 'uNkulunkulu weSmanga'.
Manje izingqikithi zabantu abadala kuma-manga bezikhona kusukela ngawo-1940 kodwa ezinye zalezi zithombe zazingokoqobo kunezinhlamvu zekhathuni ezazithandwa nguTezuka.
Ngo-1979 yilapho u-Azuma Hideo’s UCybelle uchungechunge lwakhishwa.
UHideo’s Cybelle kuchaziwe imboni yeHentai ngokuba ngesinye sezizathu, noma mhlawumbe nesizathu esiqondile sokushintshwa kwamahlaya ezithombe zocansi zaseJapan.
Kusuka kokungokoqobo kuya kubalingiswa abafana nekhathuni. Ngenxa yeCybelle yakhe, kwaqala inhlangano yama-manga enezithombe ezingcolile, kamuva ezobona ukuqhuma kwama-lolicon ngeminyaka yama-1980 ngokunyuka kwamamagazini afana nezindatshana ezithi “Lemon people” kanye ne “Petit apple pie”.
Imiphumela yomhlaba wonke kanye neHentai
Ngokuchuma kwezobuchwepheshe kweminyaka yama-1980, umphumela owaziwa ngokuphelele wokuhwebelana kwembulunga yonke ngokushesha komhlaba kanye nokuthandwa okungazelelwe kwemidlalo ye-arcade, induduzo kanye namakhompyutha akho…. Imboni yezocansi ibingenalutho ngaphandle kokukhula kanye nezwe.
Ukwanda kwenguquko yezithombe zobulili ezingcolile ngeminyaka yama-1980's, evame ukubizwa nge-A / V (i-Adult Video) kuthengise amavidiyo amaningi ngoba imindeni eminingi yaseJapan manje ibisinama-TV okungenani ama-2 nama-VCR's.
Okuyilokho wonke umuntu akufunayo. Kungonyaka we-1984 lapho kukhishwa khona uchungechunge lwe-Lolita anime. Ngokujwayelekile ikhonjwa njenge-anime yokuqala evusa inkanuko ( Hentai njengoba sikubiza kanjalo) kanye ne-Original Adaptations Video (OVA).
Uchungechunge lwe-Lolita anime lwenziwa ngenxa ye-lolicon boom yango-1980. Kubuye futhi ngo-1984 ukuthi i-Cream lemon franchise yemisebenzi iqale.
Ngakho-ke sekukonke, ama-VCR namasethi wethelevishini adlale indima enkulu ekubukeni kwe- i-hentai nezinye izinto zobulili ezingcolile emuva ezinsukwini.
Manje ake sikhulume imidlalo evusa inkanuko, eyaziwa ngokuthi 'i-Eroge'.
Sonke siyazi ukuthi ama-1980s yisikhathi lapho imidlalo yevidiyo nemidlalo ye-arcade ithandwa kakhulu.
Futhi ngokukhuphuka kwe- ukudlala umkhakha kwavela ukuvela kwamakhompiyutha. Ngenkathi imboni yamakhompyutha yaseJapan ibisokola ukuthola indinganiso yamakhompiyutha nabenzi abanjengoNEC, SHARP, neFUJITSU bencintisana.
Uchungechunge lwe-PC 98, ngaphandle kokuntuleka kwamandla okucubungula, ama-CD drives ne-Graphics elinganiselwe, yeza ukubusa emakethe ngokuthandwa kwe ukuqhuma ukufaka isandla empumelelweni yayo.
Ukucaphuna i-eroge yokuqala kungukuzithoba, ngoba kunzima ukwazi ukuthi yini eza kuqala.
Ngenxa yezincazelo ezingacacile zanoma iyiphi ukuqhuma , sidinga ukuncika ekuhlukanisweni okuhlukahlukene nezincazelo.
Ama-Adventures ezithambile ezocansi - Okokuqala kwizindikimba zabadala ezikhishwe eMelika nge-APPLE II.
Impilo yasebusuku - Uma i-eroge ichazwa njengokuboniswa kokuqala kokuqhafaza kwezingqikithi zabantu abadala baseJapan lokhu kungokokuqala. Ikhishwe ngo-1982 yi-KOEI.
Tenshitachi no gogo - I-eroge yokuqala enezitayela ze-anime eyakhishwa ngo-1985 nguJAST.
Ingelosi Yeziphithiphithi - Umdlalo wokuqala wokudlala indima. Ikhishwe yi-ASCII
Ukuqhubekela phambili kusuka emidlalweni. Kungasekupheleni kweminyaka yama-1980 lapho imakethe yaseDoujinshi (imisebenzi ezishicilela yona) yanda futhi kulinganiselwa ukuthi cishe uhhafu wemakethe yayo inezithombe ezingcolile.
Izinkinga ze-copyright zihlupha imakethe kodwa imakethe yaseDoujinshi iyindawo evamile lapho umuntu angaqala khona ngaphambi kokwenza i-debut kumagazini okhokhelwayo.
futhi ngasekupheleni kweminyaka yama-1980 lapho kwaba khona enye yezimpikiswano kakhulu i-anime evusa inkanuko yenziwe. Urotsukidoji La Blue Girl ikhishwa ngo-1989 nguToshio Maeda.
I-La Blue Girl Vol 1 & 2 Qala Ukuthenga Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Ikhishwa yimidiya yaseCentral park ngo-1993. Imvamisa ikhonjwa njenge-anime eyenze ukuthi i- uhlobo lokudlwengula.
Ngenkathi ifilimu ikhishwa e-US yachazwa njenge “Cwiliswa ezithombeni zobulili obonakele nobudlova obukhulu”.
Kwenqatshelwe ngokuphelele 'ngabacwaningi bezincwadi base-UK futhi bavimbela ukusatshalaliswa'.
Ukukhuluma ngama-sensors ake sixoxe ngokuvinjelwa.
Njengokukhula komkhakha wezithombe zocansi eJapan kusukela ngawo-1970, ukucwaninga bekulokhu kungumdlali omkhulu kulo mkhakha.
Lokhu kungenxa yokuthi ukuze uthole inzuzo noma uthengise imisebenzi yakho kufanele ungene ngemithetho engacacile yokuvimbela EJapan.
Ake siqale ngeSahluko XXII, i-Article 175 yekhodi yobugebengu yaseJapan enqabela ukushicilelwa kwezinto ezingamanyala.
Ukuya ocansini kowesilisa nowesifazane kanye nezinwele zasesidlangalaleni kubhekwa njengokuhlambalazayo (yingakho iningi leziqu zenziwa ngemininingwane engatheni yomzimba).
Kodwa-ke, ngenxa yomthethosisekelo waseJapan (Isigaba 21) esivumela ukukhuluma ngokukhululeka kanye nenkululeko yabezindaba kufana nekhodi yobugebengu. Kepha njengoba isikhathi siqhubeka kanjalo nokuchazwa kwale mithetho emi-2 kepha owamuva kakhulu okungenani ubeke umdwebo wedijithali ngaphezulu kocansi.
Ezinye zalezi zibonelo yilezi ukufiphaza amachashazi nokukhanya ezithombeni ezimile.
Ngo-1986, UToshio Maeda 'Unkulunkulu we-hentai hentai' wayefuna ukwedlula ukucindezela kocansi uma kusetshenziswa izilo nezindwangu.
Lokhu kuholele ekushicilelweni okukhulu kwemisebenzi equkethe amarobhothi, izilo, amatende ... njll. Izitho zangasese zikabani ezazibukeka zehluke kakhulu kwezobulili zomuntu, ezazisiza ukuzungeza imithetho yokuvimbela.
Yile mithetho lokho kwenza i-hentai yokuqala isebenza ngokusemthethweni ukungenisa futhi kwaba ngabokuqala abaphumelelayo.
Ukukhiqizwa kwamavidiyo amaningi kungokwenhlangano yokuziphatha enquma ukuthi yamukelekile noma cha.
Inhlangano yeNihon Ethics yevidiyo, kanye ne-Ethics Organisation yeComputer Software ziyizibonelo zale nhlangano.
ucezu olungcono kakhulu lwempilo i-anime ebizwa
Kepha izinkinga azigcini lapha ngoba usadinga ukucabanga ngesihloko somsebenzi wakho, ngokwesibonelo, ividiyo ekhuluma “ngephathi yocansi yamantombazane eneminyaka engu-18!” ingabizwa ngokuthi 'iphathi yocansi yeminyaka engu-1x!' ukugwema ukwephula umthetho.
Ngisho nangendlela obukeka wethusa ngayo umthetho sekukhona abantu abambalwa kakhulu ababoshiwe ngokususelwa kule mithetho.
Isivivinyo sakamuva kakhulu ukulahlwa yicala Suwa Yuuji nge-manga lakhe le-Hentai: Misshitsu.
Ekuqaleni wahlawuliswa ama-yen angu-500 000 futhi wagwema isikhathi sasejele ngokuvuma icala.
Lapho edlulisela icala eNkantolo Ephakeme yaseJapane ngezimpikiswano zokuthi imanga lalingelona ihlazo futhi licacisa izinto eziningi kwi-intanethi, inhlawulo yakhe yaphindeka kathathu yaba ama-yen ayizigidi eziyi-1.5!
Ikhulu lama-21 ezigcemeni
I-logo entsha ngemuva kokuvala.
Ngo-2005, A.D imibono ilebuli ye-hentai Izithombe ezithambile ze-cel vala ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, futhi ngo-2008 - Imithombo yezindaba yepaki emaphakathi.
Omunye wabasabalalisi abakhulu be-hentai eMelika bafaka ukuqothuka.
Noma ngabe unesiqalo esibuhlungu kangaka, ama-2000's ahamba kahle ngokushelela neziqu ezinhle ezinjengezi:
I-Kanojo x Kanojo x.
IBoku no Pico.
Lezi zaba enye yezidume kakhulu Hentai iziqu zama-2000's.
Kuze kube namuhla, iHentai uhlobo olukhula ngokushesha oluhola umngcele wezokuzijabulisa wanamuhla futhi alukhombisi zimpawu zokuma.
Ngezethameli ezibanzi nezinhlobonhlobo ezifuna ukukhethwa okungcono futhi okubanzi kwezihloko kanye nezithambo eziqine ngokwedlulele, akumangalisi ukuthi i-hentai yaba yinto engaphezulu nje kokuthi 'i-jack off' impahla.
I-Atomic Heritage Foundation
Lo mdlalo uhlanganisa umqondo wemidlalo yokudlala indima (RPG) ne-erotica. Lapho ukwazi khona ukuzakhela ama-harem wakho ngenkathi ukuwo.
Qala Ukudlala Manje Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Umlando Wezinombolo ZeNendoroid: Masingene Kokuthi Babe Buhle Kangaka Futhi Bathandwa Kangakanani
Ama-29 + Lewd Anime T Shirts Abathengi be-Hentai Bazothanda
uchungechunge olungcono kakhulu lwe-anime sonke isikhathi
ucezu oluphezulu lwe-romance anime
ucezu oluhle kakhulu lwempilo yothando manga